Madaxweynaha Somaliya oo la kulmay Xildhibaanada ka biyo diidan moosinka laga keenay Xukuumada - iftineducation.com
Madaxweynaha Somaliya oo la kulmay Xildhibaanada ka biyo diidan moosinka laga keenay Xukuumada
iftineducation.com – Madaxweynaha Dowladda Federalka Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxa uu Magaalada muqdisho kula kulmay Xildhibaanada Baarlamaanka, kuwooda ka soo horjeedo mooshinka laga keenay Ra’iisal Wasaare C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Kulankaan, ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia, iyadoo Madaxweynuhu ka codsaday Xildhibaanada, in khilaafka taagan lagu dhameeyo wada hadalo, si aynaan u curyaamin hawlihii Dowladda.
Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil iyo Xildhibaan Ibraahim Xaaji Suleymaan, ayaa la hadlay Warbaahinta ka dib kulankaan, iyagoona kaga warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen Madaxweynaha iyo wixii leesku waafaqayba.
Xildhibaan Cabdi Barre, ayaa sheegay in Madaxweynaha Somaliya uu ugu yeeray in khilaafka taagan lagu dhameeyo wada hadal, iyadoo laga wada shaqeynaayo sidii ay horey ugu sii socon laheyd Dowladda Federalka.
Xildhibaan Cabdi Barre waxa uu intaa ku daray inay soo dhaweynayaan baaqa uu u soo jeediyay Madaxweynaha, ayna arrintaan ahayd mid kol hore la doonaayay in la sameeyo.
Xildhibaan Ibraahim Xaaji Suleymaan, ayaa wuxuu isna sheegay in kulanka leesku faaqay inay guddi soo magacaabaan, uga qaybgalo wada hadalada lagu dhameynaayo khilaafka taagan, isla-markaana ay dhankoodu magacaabeen guddi shan xubnood ka kooban.
Tani, ayaa waxay ku soo aadeysaa, xilli Magaalada Muqdisho ay ka soconayaan dadaalo lagu doonaayo in leeskugu soo dhaweeyo Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha Somaliya.
Tarsan iyo kooxdiisii hore oo xisbi ku dhawaaqay: Sawirro
Madaxweynaha Puntland oo ka digey mooshinka laga keenay Xukuumada C/wali